टेम्पो चालक बिनाको कलाकार बन्ने सपना अधुरै - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
कृष्ण आचार्य बैशाख ६
बिहान ५ बजेबाट सडकमा गुड्ने उनको टेम्पो राति ९ बजेसम्म चलिरहन्छ। कतिपयले त उनलाई व्यक्तिगत रुपमै चिन्छन् पनि।
दैनिक १४ घण्टाको बिना मोक्तानको कठोर परिश्रम आफैँमा प्रेरणादायी छ। रामेछापकको पिङ्खरीकी उनी थोरै महिला टेम्पो चालकमध्ये सम्भवतः सबैभन्दा कान्छी हुन्।
टम्पो चालक बिनाको काठमाडौं आगमन कथा ३ वर्षअघि सुरु हुन्छ। त्यतिबेला बिनाले भर्खर एसइइ सकेकी थिइन्। लक्ष्यसहितको सपना पछ्याउँदै उनी काठमाडौं आइन्। काठमाडौं अर्थात् ‘बाहिरिया’हरुका लागि एउटा सपनाको सहर। सपना बोकेर सहर भित्रिनेहरुको यहाँ कुनै खाँचो छैन। कोही अध्ययन, कोही काम, कोही व्यापार यहाँ भित्रिने सबैका आ–आफ्ना खोजी छन्, लक्ष्य छन्, उद्देश्य छन्। यी लक्ष्यहरुमध्ये पनि आ–आफ्नै तह छन्।
यिनै स्वप्नदर्शीहरुको भिडमा बिना कक्षा ११ मा भर्ना भइन्। बिहान कलेज जान्थिन्, दिउँसो सँगै बस्ने गाउँले दिदीसँग ट्याम्पोमा हिँड्थिन्। ती दिदी जो ट्याम्पो चालक थिइन्। उनी त्यसमै चढेर काठमाडौं घुम्थिन्। उनका लागि त्यो एउटा रमाइलो रह्यो।
कलेज पढ्न काठमाडौं आएकी उनी दिनहुँ गाउँ पिङखरी सम्झिन्थिन्। त्योसँगै उनको सम्झनामा आउँथ्यो पुरानो लक्ष्य अर्थात् कलाकार बन्ने चाहना। तर यो सहज थिएन। उनको परिस्थितिबाट हेर्दा लगभग असम्भव नै थियो।
‘मलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसका लागि कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ केही थाहा थिएन।’
एक दिन दिदीले सुझाइन्, हिजोआज कलाकार बन्न त राम्रो नृत्य गर्न जान्नुपर्छ। दिदी ठिकै भनेकी थिइन्। तर नृत्य प्रशिक्षण लिन उनीसँग पैसा थिएन।
निकै दिनको मस्तिष्क मन्थनपछि उपाय निस्कियो, ‘टेम्पो चालक बन्ने। कमाएको पैसाले नृत्य सिक्ने।’
दिदीसँग हिँड्दा हिँड्दा टेम्पोसँग उनी सहज अनुभव गर्न थालिसकेकी थिइन्।
कलाकार बन्न पहिलो प्रयासस्वरुप उनले ड्राइभिङ सेन्टर ज्वइन गरिन्, टेम्पो सिक्न। र आफ्नो सपनालाई स्टेरिङमा राखेर घुमाउन थालिन्। यतिन्जेलसम्म उनले आफ्नो उद्देश्यको सोझो समाधान बुझेकी थिइन्, ‘सपना पूरा गर्न गर्न स्टेरिङ समाएर काठमाडौं परिक्रमा गर्नुपर्छ।’ सायद त्यही भएर होला उनलाई स्टेरिङ चलाउँदा हातमा ठेला उठे पनि मतलब भएन।
तेस्रो हप्तामा उनी तीनपांग्रे टेम्पो चलाउन सक्ने भइन्। १५ दिनपछि लाइसेन्स निकालिन्। दिदीको सिफारिशमा उनले साहूबाट टेम्पो पाइन्। अब उनको कलाकार बन्ने सपना काठमाडौं सहरमा गुड्न थाल्यो।
म्युजिक भिडियोकी नायिका
दोस्रो चरणमा उनी नृत्य कक्षा भर्ना भइन्। किनभने उनको जीवनको लक्ष्य नै कलाकार बन्नु थियो। नृत्य कक्षाका कारण कलेज छुट्यो। त्यतिबेला १७ वर्षकी उनी काठमाडौं टेम्पो चलाउने उनी सम्भवतः सबैभन्दा कान्छी चालक थिइन्।
‘यात्रुहरु मलाई हेरेर ट्याम्पो चढ्न डराएकोजस्तो गर्थे’, उनी सम्झिन्छिन्, ‘यात्रु डराएको, नपत्याएको जस्तो लागेपछि उपाय खोजी गरेँ। मास्क लगाउन थालेँ।’ टेम्पोको कमाइ सरदर दैनिक ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी हुन्थ्यो।
एक दिन नृत्य प्रशिक्षकले उनलाई म्युजिक भिडियो अफर गरे। उनी त्यो रात निदाउन सकिननँ।
‘म्युजिक भिडियो, त्यसपछि फिल्म’, उनको मनमा पुराना सपनाका नयाँ संस्करणहरु नाँच्न थाले। ऐना हेरेर अभिनय गरिन्। एक्लै मुस्कुराइन्, हाँसिन्। मेकअप गरिन् अनि आफूलाई प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी, रेखा थापाहरुसँग दाँजिन् जो चलेका थिए।
२०७४ चैतसम्म आइपुग्दा बिना म्युजिक भिडियो खेल्ने भइन्। केही दिनमा सुटिङ सुरु भयो। मेकअप, हिरोइनले लगाउनेजस्ता कपडा। सबै तयार भए। साँच्चै उनलाई आफ्नो सपना पूरा हुँदै गएको अनुभूति भयो।
केही महिनापछि भिडियो सार्वजनिक भयो, ‘गैरी नदी डुङ्गा तरौँला...।’
उनले आफ्नो अभिनय सयौँ पटक हेरिन्। जति पटक हेर्थिन् पुलकित हुन्थिन्। त्यसपछि उनले लगातार थप ५ म्युजिक भिडियोमा काम गरिन्। ती सबै औसत थिए। ६ म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेपछि उनले केही रहस्य थाहा पाइन्। ।
बिना मोक्तानका लागि कुनै बेला सबैभन्दा प्रिय लाग्ने सपना अहिले विस्तारै धमिलो बन्दै गएको छ। म्युजिक भिडियोमा काम पनि गरेकी छैनन्। लगाव पनि घटेको छ।
‘दुःख गरेर पैसा कमायो, भिडियो खेलेर उडायो भनेजस्तो भयो’, उनी भन्छिन्, ‘पैसा तिरेर कति दिन म्युजिक भिडियोकी नायिका भनेर देखिनु?
म्युजिक भिडियो नायिकाले उल्टो पैसा तिर्ने ? उनले आफू त्यसरी नै कलाकार बनेकी खुलाइन्।
‘केही स्थापितबाहेक सबै नयाँहरुले पैसा तिरेर नै अभिनय अवसर पाउने रहेछन्’, अब उनलाई लाग्न थालेको छ, ‘मैले सोचेजस्तो सहज यो क्षेत्र होइन रहेछ। हिरोइन बन्न त पढालेखा, टाठोबाठो हुनु पर्ने रहेछ।’
कलाकार बन्ने सपना छोडियो तर सपना कोरल्ने उनीको बानी उस्तै छ। एउटा सपनाको ‘ट्राजेडी’मा परेकी उनी यतिबेला दोस्रो सपना कोरल्दै छिन्। अब उनी नयाँ टेम्पो किन्ने योजनामा छिन्।
‘फिल्ममा खेल्ने युवती नायिका हुन्छे भने ट्याम्पोमा हजारौँलाई गन्तव्यमा पुर्याउने युवती नायिका किन नहुने ?’, उनी प्रश्न गर्छिन्।
बिनालाई आफूले रोजेको बाटोप्रति कुनै गुनासो छैन। श्रम गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिएको स्मरण गर्दा उनको मन प्रफुल्ल हुन्छ। ‘कलेज नछाडेको भए हुने रहेछ भन्ने चाहिँ लागिरहन्छ’, उनी सुनाउँछिन्, ‘त्यो समय त्यस्तै भयो अब आफ्नै टेम्पो कनेर अरु काम गर्छु।’
कहिले कहीँ यात्रु केटाहरुले जिस्काउँछन्। त्यतिबेला उनलाई नरमाइलो लाग्छ। ‘यो सहरमा थरिथरिका मान्छे छन्। सबैखालै मान्छे मेरो टेम्पो चढ्छन्’, उनी भन्छिन्, ‘केटाहरुले हेप्न खोज्छन्। कसैले राम्रो भनेर जान्छन्।’ तीन वर्षको सडक अनुभव संगालेपछि अब उनलाई लाग्न थालेको छ, ‘फूलको आँखामा फूलै संसार।’
कहिले कहीँ कलाकारको पुरानो ह्याङओभरले झस्काउँछ। उनी त्यसलाई दबाउँछिन्, फैलिनबाट रोक्छिन्। अब बिनाको एउटै इच्छा छ, आफ्नै टेम्पो किनेर समाजका लागि प्रेरणादायी काम गर्ने। थुप्रै महिलाहरुका लागि हौसलाको पात्र बन्ने। विशेषगरी महिला स्वरोजगार क्षेत्रमा।
‘यस्तै कुरा मनमा खेलाएर काठमाडौंमा फन्को लगाइरहेकी छु’, बिना भन्छिन्।
प्रकाशित ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार | 2019-04-19 11:07:23